Ndị ụgbọ elu Lufthansa Group na-agbakwunye ụgbọ elu US, Spain, Portugal na Scandinavia ọhụrụ 440 maka ekeresimesi na ụbọchị ọhụrụ.
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị ụgbọ elu Lufthansa Group na-agbakwunye ụgbọ elu US, Spain, Portugal na Scandinavia ọhụrụ 440 maka ekeresimesi na ụbọchị ọhụrụ.
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị ụgbọ elu Lufthansa Group na-agbakwunye ụgbọ elu US, Spain, Portugal na Scandinavia 440 ọhụrụ maka ekeresimesi na ụbọchị ọhụrụ.
Na Europe, a na-achọkarị ebe ndị dị na mpaghara Spanish na Canary Islands, Portugal na ebe anwụ na-acha na mpaghara Mediterranean yana Scandinavia.
Site na ọdụ ya dị na Munich na Frankfurt naanị, Lufthansa na-enye ihe karịrị ụgbọ elu 120 nwere ikike nke oche 25,000 n'oge ekeresimesi.
Na US, New York na ebe ị ga-aga na steeti Florida na-agba akwụkwọ karịsịa mgbe mgbe.
N'iji atụmatụ ndị njem ụgbọ elu kwesịrị ịtụle n'ọnọdụ nke ọ bụla usoro ntinye ugbu a kwesịrị ekwesị na iwu iche iche.
Gbọ elu nke Lufthansa Group (Lufthansa, Switzerland, Austrian ụgbọ elu, Brussels ụgbọ elu na Eurowings) na-enye ihe dị ka oche 80,000 ọzọ na ụgbọ elu 440 maka oge ezumike na-abịa na afọ ọhụrụ. Ndị ụgbọ elu na-aza ugbu a maka mmụba nke ogologo izu na-achọ ụgbọ elu n'oge ezumike ezumike site na ịmalitegharị ebe ha na-amụba ugboro ole njikọ dị ugbu a ma ọ bụ ibuga ụgbọ elu buru ibu.
Site na ọdụ ya na Munich na Frankfurt naanị, Lufthansa na-enye ihe karịrị ụgbọ elu 120 ọzọ nwere ikike nke oche 25,000 n'oge ekeresimesi.
Na US, New York na ebe ị ga-aga na steeti Florida na-agba akwụkwọ karịsịa mgbe mgbe. Na Europe, a na-achọkarị ebe ndị dị na mpaghara Spanish na Canary Islands, Portugal na ebe anwụ na-acha na mpaghara Mediterranean yana Scandinavia. Na mgbakwunye na ebe ndị a, ebe egwuregwu ski na Lapland (n'ebe ugwu Finland) na-alaghachi na nhazi ụgbọ elu. Ya mere, mmadụ rutere n'oge ezumike na afọ ọhụrụ site na Frankfurt Ivalo na Kuusamo nakwa site na Munich Kittilä na Lappland na Tromsö na Norway - Northern Light gụnyere.
Enwere ike ịkwado ụgbọ elu niile ozugbo. N'iji atụmatụ ndị njem ụgbọ elu kwesịrị ịtụle n'ọnọdụ nke ọ bụla usoro ntinye ugbu a kwesịrị ekwesị na iwu iche iche.
Ndị njem nwere ike inye aka na nchekwa ihu igwe ma mee njem ikuku ha CO2 na-anọpụ iche. Na mgbakwunye na nhọrọ nke ịkwụsị ụgbọ elu site na ọrụ ihu igwe dị elu, ndị ọbịa Lufthansa nwere ike iji mmanụ na-adigide efe efe taa. Ụgbọ elu nke Lutù Lufthansa ejikọtala nhọrọ ndị ahụ n'ime usoro ntinye akwụkwọ. Mpempe akwụkwọ ozi ugboro ugboro nwere ike ịhụ ha na ngwa Miles & More.